डि Fonvizin - पहिलो रूसी playwright क्रूर serfdom समयमा ventured गर्ने playwright मालिकको दुवै र दास, किसान भ्रष्ट, आफ्नो अनैतिकता को मुद्दा उठाउनु। Prost-Skotinin र आफ्नो परिवारमा को परिवार को उदाहरण, उहाँले autocracy को विनाशकारी सार प्रकट देश को राज्य को यी "मालिकको" धक्का केही सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक खाडी देखाउनुभयो।
नाम र शीर्षक
विशेष महत्त्व सबै वर्ण को पोट्रेट बीच छवि Mitrofanushka छ। को कमेडी Fonvizin मा "Oaf," उहाँले शासकहरुले को साना पुस्ता र राज्य शक्ति, आशा र देश को समर्थन भविष्य bulwark को बल प्रतिनिधित्व गर्दछ। कति जवान आफ्नो उच्च उद्देश्य पूरा? नाम र सामाजिक स्थिति को व्याख्या: नायक को कैरेक्टराइजेशन मा दुई प्रमुख अवधारणाहरु छन्। किन म Fonvizin "Mitrofanushka ignoramus" यो कल? पहिलो तल्ला समयमा रूसी भाषा मिडिया दैनिक प्रयोगमा सामान्य थियो। तिनीहरूले पुगेको छैन जो छन् पनि 21 वर्ष महान मूल को मान्छे, त्यसैले सेवा गर्न, सार्वजनिक सेवामा कानुनी उमेरको थिए र भनिन्छ। तिनीहरूले आमाबाबु, केही bothering को हेरविचार अन्तर्गत बस्थे। तपाईं Pushkin द्वारा "कप्तान छोरी", र त्यहाँ सम्झन भने मुख्य पात्र नै उपनाम प्राप्त गर्दछ। नाम लागि जाँदा, त्यसपछि यसको मूल्य डिकोड धेरै महत्त्वपूर्ण छवि Mitrofanushka प्रतिनिधित्व भनेर बुझ्न छ। को कमेडी Fonvizin "Oaf," मा आत्मा र classicism को परम्परा मा काम, नाम र थर को बोल्ने स्वागत गरिन्छ। "Mitrofan" - रूपमा अनुवाद ग्रीक शब्द, "तपाईंको आमा हो" "आमा जस्तै।" के मतलब, मा तल हेर्न।
"मेरो उमेर आयोजित छ। संसारमा आफ्नो कुक "
त्यसैले श्रीमती Prost छोरा भन्छन्। र, साँच्चै, यो शाब्दिक उहाँलाई सहज र खुसी भविष्य दिन puffs। खुसी, को पाठ्यक्रम, हेर्नुहोस् को आफ्नो बिन्दुबाट। कसरी, त्यसपछि, मातृ भाग तर विश्वसनीय सुरक्षा "नर्स" Yeremeyevna यो महान वंशज अन्तर्गत बढ्छ? सामना गरौं: यो भंगशील, अशिष्ट, अल्छी स्वार्थी, SPOILED, एक हात मा, मूल र वर्ग सुअवसर को permissiveness, र अन्य छ - यो अविवेकी, अन्धा, "आमा" पशु प्रेम। यो अर्थमा, Mitrofanushka कमेडी Fonvizin गरेको को छवि "मामूली" धेरै विशिष्ट छ। स्थानीय aristocrats एक विशाल संख्या, उहाँलाई जस्तै, समय idly अभिभावकको संपदा मा, परेवा chasing एक गढ दिएको आज्ञा पालन र आफ्नो काम देखि व्युत्पन्न गर्न ती लाभ प्रयोग बिताए। Fonvizinskaya वर्ण आफ्नो वर्ग को सबै भन्दा नकारात्मक सुविधाहरू embodies। उहाँले defenseless र शक्तिहीन ती संग साहसी र अशिष्ट छ। यो एक भाइ तिनलाई हुर्काएका Eremeevna अपमान। शिक्षकहरू केहि उपयोगी केही रुचि हुनुको छैन, गर्न चाहने होइन Mocks। पनि आमा पिता despises र उहाँलाई अशिष्ट। तर बलिया छौं गर्नेहरूलाई उहाँले एक कायता थियो। Skotinin आफ्नो भान्जा पिट्न चाहँदा तिनले आफ्नो पुरानो नर्स पछि लुकाउँछ। र त्यो Orlici आफ्नो प्रिय पाल्तु जनावर रक्षा गर्न rushes! वर्ण र तरिका Mitrofanushka कमेडी Fonvizin "Oaf" आफु को लागि कुरा। छोरा आमा पूर्ण प्रत्येक अन्य पूरक। मेरी आमा पढ्न न त छोरा थाहा छैन कसरी लेख्न न भन्ने तथ्यलाई गर्व छ। र उहाँले कसैसँग साझा छैन अध्ययन सल्लाह होइन गणित, सबै आफैलाई लिन। र भूगोल पनि छैन आवश्यक छ: cabbies dovezut! मुख्य विज्ञान - एक टाँसिएको हनन रूपमा किसान, "layatsya हो लड्न" - म पूर्ण चरित्र सिके। मेरो आमा जस्तै, त्यो आफ्ना आस्तीन गर्न, उहाँलाई भएका मानिसहरू र कुराहरू वा उहाँलाई लागि बोझको जन्तुहरूसित छैन serfs र domestics सामना गर्न केवल लागि मात्र रोल।
"Zlonraviya फल योग्य"
हामी वाक्यांश लेखक (डि Fonvizin) संग समाप्त के धेरै राम्रो सम्झना "Oaf।" एकै नजरमा यो Mitrofanushka विशेषताहरु। लागि धनी दाइजो सोफिया ventured आफ्नो आमा को अपहरण संलग्न थियो त्यो छ। र त्यसपछि, जब Prost को सम्पत्ति व्यवस्थापन, बिजुली को deprived देखि excommunicated र आफ्नो छोरा बाट सहानुभूति खोज्ने छ, उनले यसलाई धक्का। म आफ्नो आमा आवश्यक छैन। हामी जो कोहीलाई आवश्यक छैन। यो जनावर, पनि नैसर्गिक स्नेह devoid। यस सन्दर्भमा, नायक आमा पनि surpassed। यो प्ले अन्तिम छ भने धिक्कार छ र सहानुभूति पनि एक प्रकारको छ, उहाँले - मात्र घृणा र indignation।
दुर्भाग्यवश, हाम्रो दिनमा वास्तविक कमेडी। कुनै आश्चर्य त्यो राजधानी र प्रान्तीय थिएटर को चरण देखि धमकना छैन!
सिरप "nimulid": छोराछोरी, analogs, समीक्षा लागि प्रयोगको लागि निर्देशन
हामी कि सुत्केरी आमा बीउ पत्ता
गुर्दे colic। गुर्दे colic मा आपतकालीन हेरविचार।
Vinnitsa होटल। आफ्नो सुविधाहरू, लाभ र फाइदा